ओई हात काँ… ? होलीले भित्र्याएको बिकृति ! (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
ओई हात काँ… ? होलीले भित्र्याएको बिकृति ! (भिडियो सहित)
एसएसपी दिवेश लोहनी, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा
होलीका तीन अनुभव
–डा. रन्जितकुमार झा, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा कार्डियो डाइबिटोलोजिष्ट गजेन्द्रनारायण सिंह
होलीका केही रमाइला सम्झना छन् । पहिलो काठमाडौंमा बिएस्सी पढ्दाको क्षणको हो । अहिले सम्झदा पनि हाँसो लाग्छ त्यो । भएको के थियो भने साथीहरूसँग मस्तले होली खेलियो । साथीहरूले झुक्याएर भाङ खुवाएछन् । डेरामा पर्खन खोज्दा बिजुली बजारको पुल पार गर्नै सकिएन । लठ्ठै परेँछु, उठ्नै सकिनँ । दुई घण्टासम्म त्यही पुलमा बसे ।
अर्को चै क्याम्सको सम्झना हो । म अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्दै थिएँ । साथीहरूसँग मिलेर क्याम्पसको होस्टलको छतमा बसेर बाटोमा हिँड्ने एउटी युवतीलाई लोला हानेका थियौं । ती युवती र उनका आफन्त सरासर होस्टलको छतमा आएर पटापट चड्कन हाने । भागाभाग भयो । वास्तवमा हाम्रै गल्ती थियो । हामीले सरी भन्यौं ।
म सम्झिन्छु, ‘२०७२ साललाई । काठमाडौंमा थिएँ । साथीहरूसँग पार्टी खाँदै होलीमा रमाउँदै थियौँ । खुब रमाइलो गर्दै थियौँ । अस्पतालबाट बिरामी अत्यन्तै सिरियस अवस्थामा पुगेको भन्दै फोन आयो । कपडाले हतारहतारमा रङ पुछेर अस्पताल दौडिएँ । अस्पताल पुगेँ । बिरामी भेन्टिलेटरमा छट्पटाइरहेका थिए । ती बिरामी निमोनियाले सिरिएस थिए । बिरामी ४५ वर्ष उमेरका थिए । ती बिरामीलाई जेनतेन बचाएँ ।
होलीमा चिकित्सक पनि रमाउन चाहन्छन् । अरूले जस्तै रङसँग खेल्न मन लाग्छ । खानपिन गर्न मन लाग्छ । तर संवेदनशिल पेशाका कारण मन खोलेर मनाउन पाइदैन । सरकारले होलीको दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आए पनि चिकित्सकीय पेसामा भएकालाई बिदा मिल्दैन । परिवारसँग रमाएर ढुक्कले खेल्न पाइँदैन ।
२५ वर्षपछि होली पर्वमा तराईमा आएको छु । यसपालि अस्पतालबाट केही समय फुर्सद मिल्यो भने मनाउने योजना छ ।
आमा गुमाउँदाको क्षण: नाजिर हुसेन
होली खेल्न रमाइलो लाग्छ तर केही वर्षदेखि होलीमा आमाको याद थपिएको छ । ६ वर्षअघि होलीकै समयमा आमा गुमाएँ । अरू सबै साथीहरु ह्याप्पी होली भनेर रङमा रमाइरहेका बेला म एक्लै थिएँ । त्यसैले अहिले पनि होलीमा आमाको यादले एक्लोपन थप थप्दो रहेछ । साथीहरुसँग होली खेलिरहे पनि कतै न कतै आमाको याद आउँदो रहेछ ।
त्यसलाई भेटे कच्याककुचुक्क पार्दिन्थेँ: दिपाश्री निरौला, कलाकार
होलीका नरमाइला घटना धेरै छन् । एउटा घटना भने अझै बिर्सन सकेकी छैन । काठमाडौं आएपछि होली मनाउन चाबहिल दिदीकोमा स्कुटरमा जाँदै थिएँ । कुन चाहिँले लोलाले यस्तोसँग बजायो कि स्कुटरको हेडलाइट नै फुट्यो । त्यही फुटेको हेडलाइट ल्याफ्रयाक ल्याफ्रयाक पार्दै घर पुगेँ । त्यो सम्झिँदा अहिले पनि लोला हान्ने ती मान्छेलाई फेला पारे अनुहारै कच्याककुचुक्क पार्दिन्थेँ होला जस्तो रिस उठ्छ । सम्झिँदै जाँदा धन्न स्कुटरमा लाग्यो मेरो अनुहारमै लागेको भए त त्यो मान्छेको अनुहार ऐनामा हेर्दा आफंै तर्सिने जस्तो बनाइदिन्थेँ होला ।
रङको बदलामा जुठो पानी: पुष्पल खड्का
काठमाडौंको घटना हो । कोठामा बसिरहेको थिएँ, एकहुल साथी आएर एक्कासि अट्याक गरे । मसँग रङ थिएन । आफैँलाई बचाउन बाटामा भाँडा धोएर राखेको पानी छ्यापीदिएँ । हुलमूलसँगै आएकी मेरी एक निर्दोष केटी साथीलाई जुठो पानीले रुझायो, अनि उनी रुन थालिन् ।
बेलुकासँगै सिसाको टुक्रा:शिल्पा पोखरेल
एकपटक मेरो क्लासमेट साथी बाइक चलाएर कतै जाँदै थियो, छतबाट कसैले बेलुनमा पानी सँगसँगै सिसाका टुक्रा भरेर हानेछ । साथी बाइकबाट लडेर घाइते भयो, अनि घाँटीभरि सिसैसिसाले काट्यो । अहिले ऊ विदेशमा छ, राम्रै छ तर मलाई त्यो घटनाले बारम्बार झस्काइरहन्छ ।
छातीमै लोला लाग्यो: अभिनेत्री सरिता लामिछाने
हरेक होली रमाइलो लाग्छ । कलरसँग खेल्न मन लाग्छ । धेरै होली खेलेको पनि छु । असत्यमाथि सत्यको विजय मनाउने पर्व भएकाले रमाइलो पनि गर्नुपर्छ । तर हरेक होली रमाइलो हुन्न । त्यस्तै एक घटना घटेको छ मेरो जीवनमा पनि ।
८ वर्षअगाडी बागबजारमा हिँडिरहेको थिएँ । एक्कासि कताबाट एउटा लोला आयो र छातीमा लाग्यो । रिंगटा लागेर भुइँमा लडेँ । सास फेर्न निकै गाह्रो भयो । होली खेल्दा मरेको समाचार सुनेको थिएँ । आफैँलाई प¥यो । त्यो घटना सम्झँदा अहिले पनि कस्तो कस्तो लाग्छ ।
होलिको रमाइलो यो भिडियो
Prevआजको राशिफल: वि.सं. २०७४ फाल्गुन १८ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मार्च ०२ तारिख-हेर्नुहोस आजको तपाइको भाग्यफल !
Nextपैसा कमाउन ठूलै बिजनेस गर्नु पर्दैन,यस्ता १० व्यवसाय गर्नुहोस्, – लगानी सानो कमाइ मालामाल हुन्छ
१ करोड सहयोग गर्ने डोल्मा भन्छिन ‘नेपाली भन्दा ठुलो मन भएका मान्छे संसारमै छैनन’ (भिडियो सहित)
के भयो यस्तो ? मिडियाʼमा अन्तरवार्ता दिइरहेका बेला एक्काʼसी ढʼले पुण्य गौतम (भिडिʼयो सहित)